Apple dia namoaka Beta faharoa ho an'ny mpamorona OS X 10.11.6 | Avy amin'ny mac aho
Averina ary satria efa zatra ratsy isika dia namindra ny milina beta indray ry zalahy Apple ary omaly tolakandro dia nanolo-tena hanangana beta, betsa ho an'ny rehetra izy ireo. IOS 9.3.3 beta, OS X 10.11.6 beta, tvOS 9.2.2 beta, ary koa watchOS 2.2.2 beta. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nahazo beta voalohany an'ny kinova fiasa manaraka izay mitantana ireo fitaovana ny watchOS.
Raha tamin'ny herinandro lasa A.pple dia namoaka ny beta voalohany an'ny OS X, tvOS ary iOSAmin'ity tranga ity, Apple dia nandefa ny beta voalohany herinandro taorian'ny rafitra fandaminana izay mitantana ny Apple Watch. Tsy fantatray ny antony tokony hanemorana izany, satria hatreto dia lasa tsy nahazo tanana intsony ireo beta.
Toy ny mahazatra, amin'izao fotoana izao dia toa nifantoka tamin'ireo zazalahy Cupertino amin'ny famahana ny lesoka mahazatra sy fanatsarana ny asa rafitra ankapobeny, toy ny mitranga amin'ireo betas izay natombok'ilay orinasa monina Cupertino ho an'ny sisa amin'ireo fitaovana.
Toa tsy latsaky ny herinandro sisa tavela ny fanombohana ny OS X manaraka, na macOS, raha toa ka voamarina ny tsaho ary manova ny anaran'ny rafitra fiasa Mac izy ireo mba hampifanaraka azy amin'ny sisa amin'ireo anarana ny rafitra fandidiana, Apple toa izany emamita ny olana madinidinika sy ny zava-bita kely fotsiny ianao efa niainan'ny mpampiasa sasany talohan'ny nijanonany tamin'ny fanavaozana ity kinova ity.
Toy ny mahazatra, Apple dia mety hijanona tsy hanavao ny El Capitan rehefa navoaka ny kinova OS X manaraka, ary azo inoana fa misy karazana solosaina sasany ho tavela amin'ny lalao fanavaozana, noho ny asany pMety ho mavesatra noho ny tokony ho izy.
Araka ny ahitantsika raha misy vaovao manandanja ao amin'ireo betaha vaovao ireo hampahafantatra anao haingana izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X El Capitan » Apple dia namoaka Beta faharoa an'ny OS X 10.11.6
Manome MacBook Pro 13 "miaraka amin'ilay fisehoana OLED